Pedro - sambo lehibe, vaky sambo lehibe - Countdown ho an'ny fanjakana
Ilay Fiadidian'ny Fandriampahalemana ho an'ny	Pedro Regis	on 20 Oktobra, 2020:
Ry zanaka malala, ny sambo lehibeNy Fiangonana [naoty an'ny mpandika teny] ary vaky sambo lehibe; izany no [antony] fijaliana ho an'ny lehilahy sy vehivavy manam-pinoana. Aza mivadika amin'i Jesosy Zanako. Ekeo ny fampianaran'ny Magisterium tena ao amin'ny Fiangonany. Mijanona eo amin'ilay lalana efa nanoro anao anao. Aza avela ho voaloton'ny fotopampianarana diso. Tompon'ny Tompo ianao ary Izy irery no tokony hanaraka sy hanompo. Omeo ahy ny tananao dia hitarika anao amin'ny fandresena aho. Mitadiava tanjaka amin'ny vavaka, amin'ny Evanjely ary amin'ny Eokaristia. Mibebaha ary mihavàna amin'Andriamanitra. Katsaho izy amin'ny sakramenta fieken-keloka. Aza kivy. Tian'ny Tompo ianao ary miandry anao amin'ny Open Arms. Mandroso amin'ny fiarovana ny fahamarinana. Ity no hafatra izay omeko anao anio amin'ny anaran'ny Trinite Masina Indrindra. Misaotra anao namela ahy hanangona anao eto indray. Mitsodrano anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina aho. Amen. Milamina.
↑1 Ny Fiangonana [naoty an'ny mpandika teny]
Posted in Pedro Regis, Ny fanaintainan'ny asa.
← Edson - Tsy misy Pretra
Sambo rendrika lehibe? →